General Chinangwa Magetsi motors ari kutengeswa kuDeplate Mutengo Mutengo
General Chinangwa Magetsi motors akanakisa mutengo
Kusiyana kweMagetsi mota Sarudzo
Sarudza kubva pane yedu kusarudza yemagetsi mota. Tora Mudiki Magetsi Magetsi pamhepo kana tsvaga zvimwe sainzi & Zvigadzirwa zvedzidzo kubva kwatiri.
Magetsi mota Zvigadzirwa
Iyo isina brushless DC yemagetsi mota inozivikanwa zvakare seyemagetsi inochinja mota (ECM kana EC mota) uye synchronous DC motors. Solenoid injini ndiyo injini inoshanda pakufamba kwesolenoid. 3 chikamu induction mota ari nyore & akasimba mukuvaka neakavimbika chinhu.
Tichakurukura nezvemhando dzakasiyana dzemagetsi emagetsi. Vibrationmotor inoshandiswa kugadzira kutenderera torque pamushini. Zvese induction mota ndeye asynchronous mota. Yemagetsi kumhanya kudzora kana ESC ndiyo yemagetsi wedunhu iyo inodzora uye inogadzirisa kumhanya kwemagetsi mota. Vibrating mota dzekugadzira nekutengesa
Isu tine zvakanakisa zvekutsvaga uye zvikwata zvebudiriro, chimwe nechimwe chine simba razvo. Isu tiri mamwe emakambani mashoma muChina ane yakazvimirira yekutsvaga nekuvandudza masimba. Tinotora mukana wekunaka. Tenga mota dzemagetsi pamitengo yemapuro neateki yedu yemagetsi yemagetsi online. Microstep mutyairi inotsika mota mutengo.
Synchronous Maindasitiri Motors
Tine makore mazhinji echiitiko mukugadzira mota ndeye kungokupa iwe yemhando yepamusoro uye yakasimba mota. Kambani yedu yakagadziriswa kubva pakutanga kugadzirwa kwemagetsi emagetsi kusvika parizvino, mutsara ac induction mota kupatsanura chikamu chakakomberedzwa pole capacitor kutanga. chimwe chikamu & 3 chikamu induction mota squirrel keji induction mota.
Mhando dzeMagetsi motors dziri kutengeswa
Isu tinotora mhando sekubatsira kwedu uye mutengo wakaderera kutendeseka. Kana uine chero mibvunzo, unogona kutirovera runhare, isu tichafara kukubatsira! Basa redu revatengi rinowanikwa maawa makumi maviri nemaviri online. Isu tiri mukurumbira EV mota inogadzira. Iyo Siemens yemagetsi mota portfolio ine yakakwira- & yakaderera-magetsi mota. Iyo isina brushless DC (BLDC) mota iri kuramba ichiwedzera kufarirwa muzvikamu zvakaita semotokari. AC mota dzinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, kunyanya nekuda kwekugona kwazvo.
Global supporter yemagetsi mota
Kana iwe uine zvigadzirwa zvako zvaunofarira, Tenga zvakanakisa zvemagetsi motors zvaunoda uye uuye ubatana nesu! Tinogona kubatsira kukutungamira kune iyo yakanyanya mhinduro kune rako bhizinesi zvido.